အလုပ်လျှောက်လွှာအဘို့အဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာ | USAHello | USAHello
သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုအဖုံးစာတစ်စောင်ရေးသားဖို့အသငျ့နေကြတယ်? ဒီစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျလိုကျနာဖို့ format တစ်ခုရှာပြီးနှစ်ခုအဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုကိုက်ညီဖို့နှုတ်ကပတ်တော်၌မျက်နှာဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
ဓာတ်ပုံ: iStock / itakefotos4u
အဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာ - အသုံးပြုမှုကိုမှအကောင်းတစ်ဦးပုံစံ
လမ်းလိပ်စာ, မြို့, ပြည်နယ်, စာပို့သင်္ကေတ
ဖုန်းနံပါတ် | အီးမေးလိပ်စာ
ချစ်ခင်ရပါသော Mr./Ms. [မျိုးနွယ်အမည်],
သင်ရေးသားနေကြသည်အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့အက္ခရာ၏ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်ပြောသင့်. သင်တို့အဘို့လျှောက်ထားနေသောအနေအထားကိုဖော်ပြ. တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အဆက်အသွယ်၏အမည်ကို Include, သင်တဦးတည်းရှိပါက. သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့ ပတျသကျ. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အကျဉ်း Be. ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်၌သင်တို့၏ရည်မှန်းချက်သူတို့ကသင်အဘို့အမေးနေကြတယ်အင်တာဗျူးသို့မဟုတ်ချိန်းပေးသင့်ကြောင်းစာဖတ်သူစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအများအပြားအပိုဒ်သုံးလျှင်, အသစ်သောသတငျးအခကျြကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားမည့်အစားသင်ပြီးသားကထပ်ဆိုပါတယ်ဘယ်အရာကိုထပ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်ဥပမာနှင့်သင်၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုထောကျပံ့.
သင့်ရဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်အနေအထားကိုဘို့သင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားများအတွက်အလုပ်ရှင်ကျေးဇူးတင်နိဂုံးချုပ်. သင်ကုမ္ပဏီကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်အချို့ကို Include. သင်သည်ထိုသူတို့ထံမှနားကြားများနှင့်ရပ်တည်ချက်အကြောင်းပိုမိုပြောနေတာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်း.
အကောင်းဆုံးဆန္ဒကိုအတူရိုးသားစွာ / ကြင်နာပတ်သတ်ပြီး / [ဤအရာတစုံတယောက်သောသူသည်ကိုရှေးခယျြ]
[သင့်ရဲ့ရိုက်နှိပ် name ကို]
အခုတချို့နမူနာအက္ခရာများမှအထက်ပုံစံလျှောက်ထားကြကုန်အံ့. အောက်ကအဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာတစ်ခုမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများလိုအပ်သည်အလုပ်တစ်ခုသင့်လျော်သည်. မျက်နှာဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာ၏ဒုတိယ entry-level အလုပ်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူးတဘို့ကိုပိုမိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်.
အဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာ - တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်များအတွက်နမူနာစာတစ်စောင်
ဤတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်နမူနာစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအထက်ပါပုံစံကိုအောက်ပါအတိုင်း. ဒါပေါ့, သင်နှင့်သင့်အလုပ်လျှောက်လွှာ fit မှစကားတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒါပေမယ့်သင်ကအက္ခရာအတွက် format ကိုသုံးနိုငျပုံကိုပြသ.
Lousville, ကင်တပ်ကီ, 98776
သြဂုတ်လ 7, 2019
ငှားရမ်း Manager ကို
TRP Tech မှ
456 အနောက် 3rd ရိပ်သာလမ်း
ငါသည်သင်တို့ကို TRP Tech မှမှာအရောင်း Manager ကိုရှာဖွေနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ခဲ့သည်. အရမ်းဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စားနှင့် software ရောင်းအား၌ငါ့အရည်အချင်းများကြောင့်ယုံကြည်ပါ၏, ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု, နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံငါ့ကိုရာထူးများအတွက်ခိုင်မာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအောင်.
ငါသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရောင်းအားပစ်မှတ်ရောက်ရှိနှင့်အသင်းများကိုစည်းရုံးတဲ့ခိုင်မာတဲ့တွင် track record နဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကြေးစားဖြစ်ကြောင်းကို. တွင် 2016, ငါငါ့ရောင်းအားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုကျော်လွန် 20% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းနှင့်အလွန်မြင့်မားန်ထမ်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နေတဲ့အချိန်ကတဆင့်သွားနေစဉ်.
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ပူးတွဲကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကနေကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, ငါထက်ပို 10 ယဉ်ကျေးမှုအသင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွေ့အကြုံအနှစ်. ငါစုဆောင်းမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအတှေ့အကွုံမြားကိုလညျးတို, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း, နှင့်အရောင်းနည်းဗျူဟာ.
ငါ Mogul.com နဲ့အရောင်းဒါရိုက်တာတုန်းက, ငါဆန်းသစ်မဟာဗျူဟာများနှင့်တည်ဆောက်ထားမိတ်ဖက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ကွပ်မျက်ခံရ. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုခြောက်လန်ထမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်စဉ်ပြုလေ၏. ငါနေဆဲရှစ်နှစ်အကြာတွင်ကုမ္ပဏီအသုံးပြုသောကြောင်းတစ်ခု onboard လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုတီထွင်.
ငါခိုင်မြဲစွာငါသည်သင်တို့၏အဖွဲ့မှတန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်. ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှ TRP Tech ရဲ့ကတိကဝတ်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်နှင့်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးရန်သင့်ကတိကဝတ်အဖြစ်. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဤအနေအထားကိုဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းကြိုဆိုပါတယ်, ငါ TRP Tech မှယင်း၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးဖို့, ငါ့အတွေ့အကြုံတွေမှချစ်ကြလိမ့်မည်.
အဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာ - entry-level အလုပ်အကိုင်အများအတွက်နမူနာစာတစ်စောင်
ဤတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာတူညီတဲ့ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း. တစျဖနျ, သင်နှင့်သင့်အလုပ်လျှောက်လွှာ fit မှစကားတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒါပေမယ့်သင်ကအလုပ်မဆိုအမျိုးအစားများအတွက် format ကိုသုံးနိုငျပုံကိုပြသ.
အောက်တိုဘာလ 12, 2019
မိုးမခ Creek အဘိဓါန်မူလတန်း
123 Rosewood ရိပ်သာလမ်း
Lexington, ကင်တပ်ကီ 99123
Willow Creek အဘိဓါန်မူလတန်းအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်ငှားရမ်းကြောင်းငါမြင်. ငါသည်ငါ့အလုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ငါ့ကိုအလုပ်အဘို့ကြီးစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းစေသည်ဟုမထင်. ငါ Zhou xun အားဖြင့်သင်တို့ကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည်, အဘယ်သူ၏သားသည်သင်၏ကျောင်းဝင်.
ငါရုံးများအတွေ့အကြုံအလုပ်လုပ်သုံးနှစ်ရှိ. ငါဘဏ္ဍာရေးသုံးသပ်သူများထောက်ခံခဲ့ကြပြီးစာသင်ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ. Beijin Huwien School မှာငါ့အချိန်အတောအတွင်း, ကျွန်မထက်ပို၏မှတ်တမ်းများထားရှိမည် 1,000 ဖွဲ့စည်းကျောင်းသားများကို. အရမ်းနေ့ကဖိုင်တွေ updated. လည်း, ငါနှစ်ခုကျောင်းကိုရံပုံငွေရှာစီစဉ်ကူညီပေးခဲ့ပြီးကခုန်.
တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးအွန်လိုင်း Co. , မှာအုပ်ချုပ်ရေးလက်ထောက်သကဲ့သို့ငါ၏နောက်ဆုံးအလုပ်အတွက်, ငါဖုန်းများဖြေကြားခြင်းနှင့်ဧည့်သည်များကကြိုဆို. ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်အစီရင်ခံစာများနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဘို့စီစဉ်ထားအစည်းအဝေးများပုံနှိပ် 20 အပတ်တိုင်း. ကျွန်မကိုလည်း ယူ. နှင့်မှတ်စုတွေ့ဆုံထွက်စေလွှတ်ခရီးသွားကြိုတင်ကိုင်တွယ်. ရှိသမျှတို့ကိုငါသည်ဤကျွမ်းကျင်မှုဥစ္စာကဲ့သို့အလုပ်များရုံးအတွက်အသုံးဝင်သောလိမ့်မယ်ထင်တယ်.
ငါသည်သင်တို့၏ကျောင်းရဲ့ခိုင်မာတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတန်ဖိုးထား. ငါစည်းရုံးရေး၌ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုထင်, ပုံစံတင်ပို့ရန်, နှင့်သုတေသနသင့်ရဲ့န်ထမ်းတစ်ဦးကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့နှင့်ဤအနေအထားနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးချက်တွေ့ဆုံမျှော်ငါ၏အကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ကြည့်ခိုင်ခံ့.
သင်တို့သည်ဤအဖုံးစာတစ်စောင်ဥပမာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. သင်က link ကို click လိုက်တဲ့အခါ, စာရွက်စာတမ်းကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ downloads, ဖိုင်တွဲကိုသွားပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါတင်းပလိတ်များနှုတ်ကပတ်တော်၌များမှာ. သင်လျှောက်ထားဖို့စကားများပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်သင့်အဖုံးအက္ခရာများများအတွက်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်သူတို့ကိုသုံးနိုငျ. မျက်နှာဖုံးစာလုံးဥပမာယခု Download.